80 jir meel ku xifdiyay Saabuun jirta 100 sano | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / 80 jir meel ku xifdiyay Saabuun jirta 100 sano
Posted by: Ahmed Haaddi October 20, 2021
Himilo – Waa Xaalad dhif iyo naadir ah, Younis Ghafour oo 78 jir Ciraaqi ah, ayaa aruurinayey saabuun noocyo kala duwan ah muddo ka badan 50 sanno.Waxa uu hadda haystaa ilaa 1,450 gabbal oo saabuun ah oo ay ku jiraan 811 nooc oo kala duwan, kuwaas oo la soo saaray lixdamaadkii qarnigii la soo dhaafay.
Odayga reer Ciraaq wuxuu hayaa gabballo saabuun ah oo jira in ka badan 100 sanno, oo ay ku jirto saabuun madaw ah oo taalla in ka badan hal qarni, saabuuntaas oo ay ayeeyadiis u haddiyadeysay hooyadiis aqal galkeedii, laakiin ma aysan isticmaalin ilaa maalintii ugu dambaysay nolosheeda.
Hooyada ayaa siisay saabuunta wiilkeeda, iyada oo kula dardaarantay inuu hayo oo uusan khasaarinin, marka lagu daro dhowr kale oo saabuun ah, kuwaas oo da’doodu ka weyn tahay 70 sanno.
Waayeelkan Ciraaqiga ah wuxuu ku uruuriyaa gabaallada saabuunta qadiimiga ah meel gaar ah oo gurigiisa ka mid ah, dhowr nooc oo saabuun kala duwan ah ayaa hadiyad ahaan uga yimid dalalka Carabta iyo Yurub, aroortii markuu tooso, waxa ugu horreeya ee uu sameeyo ayaa ah inuu aado qolka keydka ah si uu u hubiyo gaballada saabuunta ah.
Magaalada Sulaymaaniyah ee gobolka Kurdistan ee dalka Ciraaq – halkaas oo uu ku nool yahay Ghafour – waxay caan ku tahay warshadaha saabuunta, waxaana jira xaafad caan ah oo taariikhi ah, oo loo yaqaan “Sabonkaran”.
Previous: Barcelona oo heshiis kordhin u sameynaysa Ansu Fati
Next: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka
Nin 40 raadinayay cunnada asalka ee dalkiisa
Ey si joogta ah u booqda xabaasha ninkii xanaaneysan jiray
Dunida oo markii 1aad laga dhisayo magaalo biyaha dul sabbayneysa